Thit Htoo Lwin: 9/4/11 - 9/11/11
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အာဏာသိမ်း နဝတ စစ်အစိုးရ လက်ထက် ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်တချို့ လာဘ်စားခဲ့ပုံများကို ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံရုံးမှ ဝါရှင်တန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးထံ ပေးပို့သည့် လျို့ဝှက်ကြေးနန်း တစောင် ဝီကီလိခ်စာ မျက်နှာမှ ပေါက်ကြားလာသည်။ငါးဖမ်းသင်္ဘော အစင်း ၁ဝဝ ကျော်ဖြင့် မြန်မာ့ရေပိုင်နက်တွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရနေသည့် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီး တဦးကမြန်မာနိုင်ငံကို အပတ်စဉ်သွားတိုင်း မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် ချစ်ဆွေအား လာဘ်ထိုးရပုံကို ရန်ကုန်အမေရိကန် သံရုံးသို့ ပြောပြခဲ့သည်။ထို့အပြင်
လာဘ်စားသူများထဲတွင် နဝတ အတွင်းရေးမှူး ၂ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏ ဇနီးတို့လည်းပါခဲ့သော်လည်း နောင်တွင် အာဏာရှင်ဖြစ်လာသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေမှာ အနေအထိုင် ရိုးအေးကြောင်း ၂ဝ၁၁ ခု သြဂုတ်လ ၃ဝ ရက်စွဲဖြင့် ပေါက်ကြားလာသည့် ကြေးနန်းစာက ဖော်ပြနေသည်။"မြန်မာပြည်ကို အပတ်စဉ်သွားတိုင်း ငွေသားနဲ့ချည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ လောက် ကုန်တယ်။ အဲဒီထဲ က ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် (ဒေါ်လာ ၇,၅၀၀) က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ချန်ထားရတာ (ကျန်တဲ့ငွေတွေကတော့ ငါးဖမ်းခွင့် ရဖို့အတွက် မြန်မာအစိုးရဆီ ရောက်ကုန်တယ်)" ဟု သံရုံးက သိရှိရသည်ကို ၁၉၉၂ ခု မေလ ၄ ရက်စွဲဖြင့် ဝါရှင်တန် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးရုံးသို့ ပေးပို့သည့် ကြေးနန်း၌ ပါရှိသည်။၁၉၈၈ ခုနှစ် နဝတ ကောင်စီတွင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူး အဖွဲ့ (၂) ကစထမှူး ရာထူးဖြင့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မွေး/ရေနှင့် သစ်တောဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ချစ်ဆွေဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်က ဆိုသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်ဆွေသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း ခံရပြီး ၁၉၉၇ တွင် အနားယူခဲ့ရသည်။"ထိုင်းတွေကပဲ သင်ပေးလို့" (မွေး/ရေ) ဝန်ကြီးသည် အတိုင်းအတာတခုအထိ ငြင်းသာအောင် လာဘ်ဘယ်လို ယူရသည် ဆိုသည်ကို ကောင်းစွာတတ်မြောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ "ချစ်ဆွေဟာ ထိုင်းစီးပွားရေး သမားတွေနဲ့ တယောက်ချင်းတွေ့ဖို့ ငြင်းလေ့ရှိပြီး သူ့သားနဲ့ သာ အလုပ်လုပ်စေတယ်" ဟုဆိုသည်။ဗိုလ်ချုပ်ချစ်ဆွေ၏ သားက ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေပြန်ရင် လိုက်ပို့လေ့ရှိပြီး အကောက်ခွန်ဌာနက သူပါလို့ စစ်ဆေးမှု မလုပ်ဘူးဟု ဆိုသည်။"မကြာခင်ကပဲ
ချစ်ဆွေရဲ့သားဟာ လေဆိပ်ကို ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင် ၆၀ လောက်နဲ့အတူ မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲ ကြိုတင် အသိပေးပြီး အကောက်ခွန်ဂိတ်တွေကို ဖြတ်သွားခဲ့သေးတယ်" ဟု သံရုံးက သီးးသန့် မှတ်ချက်ပြုထားသည်။တခြားသော နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်လည်း ဆက်ဆံရသည့် အကြောင်း ထိုင်းစီးပွားရေးသမားက ပြောဆိုခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားရာတွင် စစ်ဦးစီး ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး၏ လာဘ်စားမှုလည်း ပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကား "အထပ်ထပ်ညှိရတယ်"ဟု နာမည်ကြီးပုံကို ဆိုသည်။ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး၏ သားက လာဘ်ရထားသော
မာစီဒီးဘင့်ဇ်ကား တစီအား မြို့ထဲတွင် လှည့်ပတ်မောင်းရာက စစ်ထောက်လှမ်းရေးက
ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကို မျက်လုံး ဒေါက်ထောက်ကြည့်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးနေအိမ်ကို စစ်ဆေးတာ လုပ်သည်ဟု ဆိုသည်။"စစ်ထောက်လှမ်းရေးချုပ် ခင်ညွန့်က အဲဒီကားကို အစိုးရထံအပ်နှံဖို့ တင်ဦးကို ဖိအားပေးခဲ့တယ်" ဟု သံရုံးက မှတ်ချက်ပြု ဖော်ပြထားသေးသည်။၁၉၉၇
ခု၌ ပါဆယ်ဗုံး လုပ်ကြံမှုမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သော ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးသည် ၂၀၀၁ ခု ဖေဖော်ဝါရီလက ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့အနီး ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျသဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။"ထိုင်းစီးပွားရေးသမားကြီးများထဲတွင် တန်ဖိုးကြီး
ကျောက်မျက်များကို မက်မောသည့် ခင်ညွန့်၏ ဇနီး၊ နဝတ ဥက္ကဋ္ဌအသစ် သန်းရွှေ၏ သားတို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖူးကြသူများ ရှိသည်"ဟု ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံရုံးက သိရှိရချက်ကို ကြေးနန်းစာအတွင်း ရေးသားထားသည်။၂ဝဝ၃ ခုတွင် နအဖ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသည့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်မှာ ၂ဝဝ၄အောက်တိုဘာတွင်
လာဘ်စားမှု၊ အမိန့်မနာခံမှု စွဲချက်များဖြင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားကာ ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ထောင်ဒဏ် ၄၄ နှစ်ဖြင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံရသည်။၁၉၉၂
ခု ဧပြီ ၂၃ တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ နဝတ ဒုဥက္ကဋ္ဌ မှ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးတက်သွားခြင်းကိုလည်း "ဒီတာဝန်ကို သူဘာသာသူ တခြား မတရားတဲ့နည်းနဲ့ ယူလိုက်တာလား" သို့မဟုတ် "အခြားဗိုလ်ချုပ်တွေကို လာဘ်စားခွင့်ပြုထားပြီး သူက ဒီရာထူးကို ရယူတာလား" ဟု ထိုင်းငှား လုပ်ငန်းရှင်က သံသယ ရှိခဲ့သည်။ထိုစဉ်က "ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေမှာ မြန်မာ အဆင့်အတန်းအရပင် ရိုးရိုးစင်းစင်း နေတတ်သူဖြစ်ပြီး လေအေးပေးစက်လို
အနောက်တိုင်း ဇိမ်ခံ အသုံးအဆောင်တွေ အသုံးနည်းတယ်" ဟု ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံအရာရှိက တဆင့် သိရှိရချက်ကို ကြေးနန်းအတွင်း ပြန်လည် ရေးသားထားသည်။စစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ၁၉ နှစ် ကျော်အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးနောက် အသက် ၇၈ နှစ်အရွယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ကာ လက်ရှိ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရီမြို့နယ်တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း စစ်ဘက် အရေးအရာများကိုမူ ဆက်လက် စွက်ဖက်ကြိုးကိုင်လျက် ရှိသည်ဟု လေ့လာသူအများက ယုံကြည်ကြသည်။၂ဝဝ၆
ခုနှစ်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ သမီးတဦးဖြစ်သော မသန္တာရွှေ၏ လက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅ဝ ခန့် အကုန်အကျခံ အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်လုပ်ငန်းများသုံး ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာခြင်းကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တပ်ရင်းများမှ ပိတ်ထားကြောင်း KIO ပြောခွင့်ရှိသူ ဦးလနန် ကပြောသည်။ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက် ဝိုင်းမော်၊ ကန်ပိုင်တီ လမ်းကြောင်းမှတဆင့် တရုတ်ပြည်က တင်သွင်းလာသော ဘိလပ်မြေနှင့် သံထည်ပစ္စည်းများကို KIO ဒေသခံ တပ်ရင်းများ ထိန်းချုပ်သည့် တပ်ရင်း (၃) လဖိုင် ဂိတ်က တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်နေသည်ဟုလည်း ဦးလနန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“စစ်ဖြစ်တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မြစ်ဆုံအတွက် သယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တင်းသွင့်ခွင့် မပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ စီမံကိန်းမှာ ပစ္စည်းပြတ်လပ်လို့ လောလောဆယ် စီမံကိန်ကြီး ရပ်တန့် ထားရတယ်လို့ သိရတယ်” ဟုဆိုသည်။ KIO နှင့် အစိုးရတပ်တို့အကြား ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်း ဖြစ်သည်။သို့သော်
မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မှု ရပ်တန့်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းကို ခေတ္တရပ်နားထားပြီး၊ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်သည်နှင့် လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုလ ၁ဝ ရက်နေ့ နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။မြစ်ဆုံဆည်
စီမံကိန်းကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ကန့်ကွက်မှုများရှိနေပြီး၊ စာရေးဆရာ ကိုတာ၊ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၊ မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်နေသူ ဦးဇော်မြင့် တို့မှလည်း ယခုလ
၁ဝ ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ကာ မြစ်ဆုံဆည် ဆောက်လုပ်ရန် မသင့်ကြောင်း ဟောပြောပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ကြသည်။သို့သော်
ဦးဇော်မင်းက မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မှုသည် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုကာ
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂမှပင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခွင့်မရှိကြောင်း နေပြည်တော် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသွားသည်။ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်များ၏ ဒုတိယပုံမှန်
အစည်းအဝေးများတွင် နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်သည့် စီမံကိန်းများအတွက် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူသင့်ကြောင်းလည်း အမတ်များက ဆွေးနွေး ကြသည်။ဦးလနန်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရသစ်၏ မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်မှုသည် လူထုဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်နေပြီး၊ KIO အနေဖြင့် ယင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို အစဉ်တစိုက်ကန့်ကွက် သွားမည် ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးလည်း ပါဝင်ကန့်ကွက်ရန်လိုကြောင်း မဇ္ဈိမကိုပြောခဲ့သည်။၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ဆောက်မှုဖွင့်ပွဲ စတင်ခဲ့သည့် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နှင့် ၂၇ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး စီမံကိန်းကို အမှတ် ၁ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ် China power Investment Corporation –CPI တို့ အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတွေ ပြန်လာနိုင်ပြီလို့ သမ္မတ အကြံပေးပြောဆို
ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေး အမြင်ကွဲပြားသူတွေ၊ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စိုးရိမ်စိတ်မရှိဘဲ ပြန်လာနိုင်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရဲမှူးကြီးဟောင်း ဦးစစ်အေးက RFA ကို ဒီကနေ့ ပြောဆိုပါတယ်။
“ပြန်လာလို့ ရတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရေးကိုယ်တာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာရှိရင်တော့ ရှင်းပေါ့။ ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ ကျနော်တို့ ရှင်းပေးလို့ ရလို့သာ ဖိတ်ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။
ဘယ်တုန်းကမှ အရေးယူတယ်ဆိုတာမှ မရှိခဲ့တာဘဲ။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့ အခုဟာက ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရဖြစ်ပြီပဲ ဒါ့ကြောင့်လဲ အားလုံးကို ဖြေရှင်းပြီး ခေါ်လိုက်တာပေါ့။ နိုင်ငံ့ အကြီးအကဲ တယောက်က သဘောထား ကြီးကြီးနဲ့ အမြင်မတူဘဲ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ ပြောတာဆိုတာ ရှိမှာပေါ့။ ဒါတွေကို သဘောထား ကြီးကြီးနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ခံမယ်လို့ ပြောတဲ့ ကိစ္စပဲ”
ပြည်ပ အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကောင်စီအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ထူးကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ အမှန်တကယ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ မခွဲခြားဘဲ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ကြေညာပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြန်လာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ သနပ်ခါးလိမ်း ချင်လို့လား။ ဒါမှ မဟုတ် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံကို တည်ဆောက် ချင်တာလား။ ကျနော်တို့ကတော့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံကနေ သုံးသပ် အကြံပေးချင်တယ်။ ဒီအတိုင်း ပြန်သွားရင်တော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထဲမှာ လူထုတွေဟာ အချိန်မရွေး ပြန်ဖမ်းလို့ရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်သွား နိုင်တယ်”
ဒါ့ပြင် ပြည်ပကနေ ပြန်သွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ အချိန်မရွေး ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခံရနိုင် တာကြောင့် နိုင်ငံသား အားလုံးအတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အာမခံချက် ရှိအောင် ဖိနှိပ်မှု ယန္တရားတွေ၊ ဥပဒေတွေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ အကြီးအကဲ ဦးအောင်ထူးက ပြောပါတယ်။
9/13/2011 10:24:00 PM
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း သို......အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
၂၀၀၅ ခုနှစ်ခန့်မှာ လက်ရှိ ဌာနရဲ့ ၀န်ကြီးအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားထားမိပါတယ်။ အကယ်လို့များ ထိုဌာနတွင် လူကြီးမင်း စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်ကို အမှတ်မှားခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား။
ဥပမာတခုဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် အာရှဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်၏ ချေးငွေဖြင့် တည်ဆောက်ရန် ဆည်တော်ကြီး စီမံကိန်းအား ၁၀ နှစ်ခန့် အချိန်ယူ လေ့လာပြီးမှ ပုံစံထုတ်ကာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစီမံကိန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် မန္တလေး
မြို့ မြောက်ဖက်ရှိ မတ္တရာမြို့နယ်တခုလုံး နွေရာသီတွင် ဆည်ရေသောက် စပါးစိုက်ခင်းများဖြင့် ယနေ့ထက်တိုင် ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်နေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်အပေါ် ပေးသော အဓိက အပြောင်းအလဲမှာ နှစ်ပတ်လည် မြစ်ရေစီးပမာဏ ပုံစံ (Annual River Flow Patterns) ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပမာဏ အပြောင်းအလဲကြောင့်
မြစ်တခု၏ မူလ သဘောတရားဖြစ်သော တိုက်စားခြင်းနှင့် ပို့ချခြင်း လုပ်ငန်းများကို တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ရေကျချိန်မှာ ပေါ်လာနေကျ သဲနှုန်းမြေနုကျွန်းတွေဟာ မြစ်ရေ မကျခြင်းကြောင့် ပေါ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလို မြေနုကျွန်းတွေ မထွန်းကားတဲ့အခါ မြစ်ကြော တလျှောက်မှ ကိုင်းကျွန်းများကို မှီခိုအသက်မွေးကြတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အခက်အခဲ တွေ့ကြပါလိမ့်မည်။
ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံမှ တာဘိုင်များ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းတို့ကြောင့် မြစ်ရေ အနိမ့်အမြင့် ရုပ်တရက် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ ဆိုးကျိုးများကို ဧရာဝတီမြစ်တလျောက်က ပြည်သူတို့သာ ခံစားရမှာဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်းက မန္တလေး ဂေါဝိန်ဆိပ်၏ တာဘောင်အပေါ် ထိ ရောက်လာအောင် တက်ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေဟာ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးက လွှတ်ချလိုက်တဲ့ ရေတွေ ရောက်လာချိန်နဲ့သာ အနာဂါတ်မှာ တိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင် ဧရာဝတီဟာ ဈေးချိုအထိ
မှားယွင်းစွာ အခြေခံထားသော အချက်များကို မူတည်ပြီး တပ်ဆင်သင့်သည့် အရွယ်အစားထက် ပိုမိုကြီးမားသော ရေအားလျှပ်စစ် တာဘိုင်များကို သုံးစွဲ တပ်ဆင်ရန် ကြံစည်ထားခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို မြင့်တက်စေရုံသာမက ကျင့်ဝတ်အရပါ ရိုးသားမှု မရှိဟု ယုံကြည်ပါသဖြင့် ထိုကိစ္စအား လူကြီးမင်းမှ မည်သို့ ကိုင်တွယ် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း သိလိုပါသည်။
စီမံကိန်းအား အနှစ် ၆၀ တိတိ ထိန်းချုပ် စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကို တရုပ်နိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီသို့ အပ်နှင်းရန် လူကြီးမင်းတို့မှ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ထားသည်ဟု ရေအားလျှပ်စစ် ဌာနမှ အရာရှိတချို့ထံမှ သိရှိရပါသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာ စတင်လည်ပတ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက် အကြာမှာ မြန်မာပြည်အစိုးရရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွင်း အပြည့်အ၀ ရောက်လာပါမလဲဆိုတာ သိချင်ပါသည်။
မြောက်ဖက်ဖျားမှနေကာ ဧရာဝတီမြစ် တကြောလုံးရှိ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့၏ အသက်အိုးအိမ်ကို ခြိမ်းခြောက်ဖျက်စီးပစ်နိုင်သော စီမံကိန်းကြီးတခုအား တိုင်းတပါးလက်သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးအပ်လိုက်သော လူကြီးမင်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လူကြီးမင်းတို့ ကြွေးကြော်ခဲ့သော စီးပွားရေး ဦးတည်ချက်များမှ “နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးတစ်ရပ်လုံးကို ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းအားသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိရေး”
ဟူသော အချက်ကို မည်သို့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသလဲဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါသည်။
ခင်ဗျား၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှ ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးအပေါ်မှာ သူတ၀က် ကိုယ်တ၀က် ခွဲဝေ ယူရမည်ဆိုလျှင်ပင် တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမှုဟာ
ပမာဏ များပြားသော ငွေကြေးသာ ဖြစ်ပြီး ရရှိမယ့် အကျိုးအမြတ်ကတော့ ကြီးမားသော စီမံကိန်းကြီးအား တရုပ်နိုင်ငံသားတွေမှ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ နည်းပညာ အတွေ့အကြုံများ အပါအ၀င် စီမံကိန်းပြီးစီးပါက ရရှိလာမည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများ ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်းလင်းခဲ့သော အချက်များအရ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအတွက် မြန်မာပြည်ဖက်မှ ပေးဆပ်ရသော အရာများနှင့် ပြန်လည်ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်တို့မှာ မထိုက်တန်ပါဟု
ဂျစ်ပစီ မိုးတိမ် ဖေဘုတ်မှ...ကူးယူဖော်ပြပါသည်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်တို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီပေးရေး ဆွေးနွေး
ရန်ပိုင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမေရိကန် အစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်တို့ မြန်မာ့ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် ကူညီပေးရေး ဆွေးနွေးကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်
အမေရိကန် အစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်တို့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
၁၀ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်တွင် မိနစ် ၄၀ ခန့်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကိုမူ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပေ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
(NLD) ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုန်းကြိုင်က “ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက လူငယ်ကွန်ရက်တွေတဆင့် အခမဲ့ပညာသင်ကြားမှု၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးနေတာတွေကို ဆွေးနွေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဆွေးနွေးပွဲအပြီး သတင်းထောက်များက မစ္စတာ ဒဲရက်မစ်ချယ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် ယခင် အထက်လွှတ်တော် အမတ် မစ္စတာ ဂျွန် မက်ကိန်းနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရသည့် အခြေအနေများနှင့် တူညီခြင်းရှိမရှိ မေးမြန်ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ရှိအခြေအနေများ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည့်အတွက် ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကိုမူ
ဆွေးနွေးခြင်း မရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေဆိုသည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် ပြည်သူကို မနစ်နာစေလို၍ ရွေးချယ်ထားသည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနှင့် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်မလာနိုင်ကြောင်း သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်ကလည်း မြန်မာပြည်အခြေအနေကို အနီးကပ် လေ့လာစောင့်ကြည့်နေကြောင်း၊ ယခုဖြစ်ပေါ်နေသည့်
အလားအလာကောင်းများမှ တဆင့် ကောင်းမွန်သည့် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်သည် NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အပါအ၀င် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) နှင့်လည်း တနာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြောင်း သိရသည်။
CRPP အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးကတည်းက တိုင်းရင်းသား နယ်မြေများတွင် တိုက်ပွဲများ ယခုတိုင်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရရှိရေး၊ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေး ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုပြင်စရာ အများအပြားရှိနေကြောင်း ဆွေးနွေးသည်ဟု သိရှိရသည်။
ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်ကလည်း ယခုလက်ရှိ အခြေအနေသည် နိုင်ငံရေးအရ ထူးခြားသော တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု မတွေ့ရသေးကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် ချွင်းချက်မရှိ လွတ်မြောက်လာလျှင် ထူးခြားသော တိုးတက်မှုဟု ယူဆနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးသည်ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ဆိုသည်။
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်သည် သမ္မတ နိုင်ငံရေး အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်လည်း ၁၅ မိနစ်ခန့် တွေ့ဆုံပြီး အကြံပေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းရပ်များကို မေးမြန်းကြောင်း အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောသည်။
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်သည် ၎င်း၏ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဋ္ဌာနနှင့် မြန်မာ့ စက်မှုဖွံဖြိုးရေးဝန်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး၊ အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဋ္ဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့နှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းရှိ NLD လူငယ်အဖွဲ့က စောင့်ရှောက်ထားသော HIV/ AIDS ဂေဟာသို့ မနက်ပိုင်းတွင် သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး လူနာများနှင့် ရောဂါ ကူးစက်ခံနေရသော ကလေးငယ်များကို အားပေးစကား ပြောဆိုသည်။ ထို့အပြင် ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်းသို့ သွားရောက်ကာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူတို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသေးစိတ် လေ့လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ပြည်တွင်းမှ ဧရာဝတီသတင်းထောက်တဦး ပူးပေါင်းရေးသားသည်။
9/13/2011 11:16:00 AM
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး စစ်ဘက် ရာထူးကရော၊ နိုင်ငံ ဒုတိယ အကြီးအကဲ ရာထူးကပါ တရားဝင် အနားယူ သွားခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၆ လလောက် ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် သူ့ဇာတိ မွေးရပ်မြေ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကန့်ဘလူမြို့မှာ သူ့ရဲ့ အရှိန်အဝါကို သုံးပြီး အနိုင်ကျင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှာနေသူတွေ ဆက်ရှိ နေဆဲပဲလို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ (Photo: AFP)
စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ယာ) နှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး (ဝဲ) တို့ အခမ်းအနားတခု တက်ရောက်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။(Photo: AFP)
ဦးကျော်ညွန့်ဟာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင် ကျူးလွန်မှု
မရှိခဲ့ပေမယ့် တပည်ဖြစ်သူ ဦးစိုးမြင့်ရဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေကိုတော့ နောက်ကွယ်ကနေ အကာအကွယ် ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့ မြို့မှာ ငွေကြေး အဓမ္မ ကောက်ခံနေတာတွေ ရပ်တံ့ပြီး အများပြည်သူ လိုလားတဲ့ မြို့မိမြို့ဘတွေ ရွေးချယ် တင်မြောက် လိုကြပေမယ့် လောလောဆယ် ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
9/13/2011 11:13:00 AM
မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စ ပြည်သူ့သဘောထား လက်ခံစဉ်းစားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းက ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာကို ဆက်လက် တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူရဲ့ သဘောထားကို အစိုးရ အနေနဲ့ လက်ခံစဉ်းစား ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက် သင့်တယ်လို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတဦး၊ ကျော်မင်းလူ (ရွှေပြည်သာ) ဆိုတဲ့ နံမည်ဝှက်တွေနဲ့ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ အကြောင်း ဆောင်းပါးရေးသူဟာ သူကိုယ်တိုင်ပါပဲလို့လည်း ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းက သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်
9/13/2011 11:12:00 AM
by Myit Makha Mediagroup on Monday, September 12, 2011 at 6:48am
နံနက် ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းအချိန်တွင် အမေရိကန်မူဝါဒရေးရာမှူး ဒဲရစမ်မစ်ချယ်နှုင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သတင်းထောက်များ၏ မေးခွန်းများအား ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
မေးခွန်းများအား ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက်များက မေးမြန်းခဲ့ကြပြီး စုပြုံတိုးလျက်ရှိသောကြောင့် မည်သည့်မေးခွန်းကို မည်သည့် သတင်းဌာနက မေးကြောင်း မှတ်တမ်းမတင်နိုင်ခဲ့ပါ)
သမ္မတဦးသန်းစိန်နဲ.မမနဲ.ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလေ.... နေပါဦးနေပါဦးအခု မစ္စတာ ဒဲရစ်မစ်ရှဲနဲ့တွေ့တာကို မေးမှာလား.
အဲဒိတော့ မမအရင်ကသူ.အရှေ.မှာဂျွှန်မတ်ကိန်းတို.ဘာတို.တွေ.ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီmeeting နှစ်ခုကြားမမရဲ. Opition visionဘယ်ဟာကပိုပြီး...။ ပိုပြီးတော့အားရှိပါတယ်ပြောရဆိုရတာ။
အိုဘားမား အစိုးရဆီကထူးထူးခြားခြားများmessage ယူထားတာများရှိပါသလား။ မရှိပါဘူး။ဒါကတော့အများလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြည်ပရောက် ဗမာတွေကိုဘာများပြောချင်ပါသလဲ? ပြည်ပရောက်ဗမာတွေလဲ
ဗမာတွေပါပဲ။ အာလုံးဒီတိုင်းပြည်တွေထဲကလူတွေချည်းပါပဲ။ ပြည်ပကတစ်မျိုးလုပ် ပြည်တွင်းကတစ်မျိုးလုပ်လို့ဘယ်ရပါ့မလဲ။ အားလုံးတူတူပါပဲ။
မြစ်ဆုံကိုအစိုးရကဆက်ဆောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ အန်တီ့အနေနဲ့ပန်ကြားလွှာလဲထုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ အဲဒီ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူး? ပန်ကြားလွှာထဲမှာထည့်ထားပေမယ့် အန်တီပြောချင်တာကတော့ ဘယ်လိုပဲပြောပြော အကောင်းစုံအဖြေတစ်ခုကို ရှာကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။
တကယ်လို့များဦးသိန်းစိန်နေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလွှတ်မယ်ဆိုရင် အန်တီ့အနေနဲ့ NLD ကို register လုပ်ပါ့မလားဗျာ?
အဲဒီ့ဟာကတော့ ဖြစ်တဲ့အခါကြမှပြောရမှာပေါ့နော်။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဆိုတာ မပြောတတ်သေးတဲ့အခါကြတော့။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေများဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်လို့ပြောတာမျိုးရှိပါသလား။
အစတည်းကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ လျောက်သွားတဲ့အခါ အမျိုးမျိုးကူညီချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာတော့ သူတို့လဲဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ရော ပြောသွားတာရှိပါသလား?
အန်တီအနေနဲ့ မနေ့က ဒဲရစ်မစ်ရှဲက လူမှုရေးအသင်းနဲ့ ကျမ်းမာရေးဂေဟာတို့သွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာရောဘာများပြောချင်ပါသေးလဲ?
HIV ဂေဟာကိုသွားတဲ့အခါကြတော့ အင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်။ လူန်ာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာ စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့ သူပြောပါတယ်။
သမ္မတကြီးနဲ့တွေ့စဉ်တုန်းက ဘာတွေဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာကို အခုထိတရားင်မထုတ်ပြန်သေးတဲ့အခါကြတော့ ပြောစရာမရှိသေးပါဘူး။
အဲဒီ့မှာသတင်းထွက်လာတာက နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားများကိုလွှတ်ရင် မမအနေနဲ့တာဝန်ယူပါမယ်ဆိုပြီး……
9/13/2011 11:09:00 AM
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိကြီးတစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်ပြောစကားကို တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ ယခုအကြောင်းအရာကို တင်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအတွက် မူလက အကြိုလေ့လာရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စဉ်က မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင် နေစဉ်ကာလအတွင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တရုတ်ဒုတိယ သမ္မတရှီကျင်ပင်း၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်ရှိသောကြောင့် မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀ အတွက် အကြိုလေ့လာရေး လုပ်ငန်းမပြီးပြတ်သေးသော စာရွက် စာတမ်းများ ပြန်လည်တောင်းယူခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ထို့နောက် မတိကျသော အချက်အလက်များကို ထိုစဉ် က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ
ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးသန်းရွှေထံ တင်ပြ၍ မူလက လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀ အစား မဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀၀ သို့ တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲကာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုပ်ဆောင်မည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် MOU ထိုးစေခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါကိစ္စအား အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ထမ်း အတော်များများမှစ၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အထိ သိရှိထားကြကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် တည်ဆောက်ရမည့် ဆည်၏ထုထည် ပမာဏသည် မဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် တည်ဆောက်ရမည့် ဆည်၏ ထုထည်ပမာဏမှာ နှစ်ဆကွာနေကြောင်းနှင့် အကယ်၍ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆည်ကျိုးပေါက်ပါ က မြစ်ကြီးနားမြို့ရေကြီးသည့် အဆင့် မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကြီးနားတစ်မြို့လုံး ရေမြှုပ်သွားမည့် အနေအထား ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ အနေအထားများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများမှ ယင်းအခြေအနေများ ကို ၀န်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြထားကြသလို MOU ထိုးပြီးစကလည်း သက်ဆိုင်ရာ တရုတ်ကုမ္ပဏီသို့ ပြန်စဉ်းစားနိုင်ရန် ပြောကြားခဲ့ဖူးကြောင်း သိရပါသည်။ သို့သော် တရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်စဉ်းစား ပြင်ဆင်ရန်ပြောသည့် ၀န်ထမ်း ကိုပြန်ပြောခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
“ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ တကယ့်ဖြစ်စဉ် အမှန်ကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အမှတ် (၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန အရာရှိကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေကို တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ယောက်က သတင်းပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသိရှိသူတွေ အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ သိထားသမျှတွေကို ဖော်ထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီ ကိစ္စမှန်၊ မမှန်ကို သက်ဆိုင်ရာက အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်”
ဟောပြောပွဲသို့ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားလေ့လာလိုသူများ လူဦးရေ ၅၀၀ ၀န်းကျင်လာရောက်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် လူငယ်ဦးရေမှာ ပိုမိုများပြားခဲ့သည်။ အခြေခံ ပညာကျောင်းအချို့မှ ကလေးငယ်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ Save the Irrawaddy ဟောပြောပွဲကို စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင်က အဖွင့်မိတ်ဆက်စကားပြောကြား၍ ညနေ ၃ နာရီဝန်းကျင်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုမြင့်ဇော်က ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင် ဆည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ EIA ထဲတွင်ပင်ပါရှိသော ဆည်တည်ဆောက်ရန် မလိုသည့်ဖော်ပြချက် အပေါ်သုံးသပ်မှု၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်၊ မိုးရေချိန်များပြားသည့်အတွက် မြစ်ရေ၊ ဆည်ရေရှိနေမည်ဆိုသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကို လေ့လာမှုများနှင့် ချိန်ထိုးပြမှု၊ ဒေသခံများအပေါ် ပြောင်းရွှေ့မှု၏ သက်ရောက်နိုင်ခြေများ၊ မြစ်ရေကို မှီခိုနေသည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှုများ စသည်တို့ကို စတင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် စာရေးဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)က 'ကျွန်တော်နှင့်မြစ်များ'အမည်ဖြင့် ဟောပြောမှုတွင် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံကို ယခင်က ရောက်ရှိခဲ့သည့်မြင်ကွင်းနှင့် ယခု မြင်ကွင်းကွာခြားပုံများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ မြစ်ကောမှုများကို သုံးသပ်မှုများ၊ ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်တို့အကြောင်း ရေးသားဖြစ်ခဲ့သော ကဗျာ၊ စာများကို တင်ပြမှုများ ပါဝင်ခဲ့သည်။
မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သေကြေပျက်စီးမှုများ အပါအ၀င် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကို ကြုံလာရမှုများ၊ ရေကာတာတည်ဆောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတွင်းတည်ဆောက်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံကို ရွေးချယ်လာပုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသည် နောင်တွင် မိုးနည်းနိုင်ခြေရှိသည့်အတွက် ဆည်တည်ဆောက်ပါက မြစ်ရေအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှုများကို ဟောပြောတင်ပြခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဟောပြောသူ စာရေးဆရာ ကိုတာက တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်
သယံဇာတနှင့် ပတ်သက်၍ ထားရှိသည့်အမြင်များ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နေမှုများ အစရှိသည်တို့ကို စာအုပ်စာတမ်းများ၊ လေ့လာမှုများပေါ် အခြေခံလျက် ဆွေးနွေးပြခဲ့သည်။
အခုတလော ကြားနေရတာ စေတနာဆိုတဲ့ စကားပေါ့။ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ ပတ်သက်တာ၊ မြစ်ဆုံမှာ ဆည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ လျှပ်စစ်မီး တွေရဖို့၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ စေတနာနဲ့လုပ်တာပါ ဆိုတဲ့စကားတွေ ကြားနေရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမိုင်းအတွေ့အကြုံ၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်း အတွေ့အကြုံအရ စေတနာရဲ့နောက်မှာ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဆင်ခြင်တုံတရား၊ တခြားသော နည်းစနစ်မှန်တွေ မရှိရင် အလကားပဲဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ဆည်ဆောက်တာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်ကို ဒီအထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာေ၀၀ါးနေတဲ့သူတွေ ရှိရင် ကျွန်တော်အခု ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဧရာဝတီဆည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးဆက်တွေ ကို လေ့လာထားတဲ့၊ ဧရာဝတီမြစ် အထက်ပိုင်းမှာ ဆည်တွေဆောက်လိုက်တဲ့အခါ ဘာအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ မြန်မာပညာရှင်၊
တရုတ်ပညာရှင်တွေလည်း ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၉၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ လေ့လာချက်စာတမ်း ၁ စောင် ထွက်ခဲ့ပါ တယ်။ ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာလမှာ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီက စာလေးတစ်ပိုဒ်ကို ဖတ်ပြချင်တယ်။ ‘မြန်မာ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာများကို အမှန်တကယ်ပူပန်၍ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ရည်ရွယ်ပါလျှင် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံတွင် သည်မျှ ပမာဏကြီးသော ရေလှောင်ကန်ကို တည်ဆောက်ရန်မလိုချေ’ တဲ့။ ဒါသည် ပညာရှင်တွေရဲ့ ထုတ်ဖော်ချက်ပါ။ တခြားတခြားသော ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရလည်း ဒီဆည်မရှိသင့်ဘူး ဆိုပါတယ်။ ဒါတွေ ကျွန်တော်တို့ချပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေ မရှိသင့်ဘူးဆို တဲ့
ရဲရဲရင့်ရင့်လှုပ်ရှားမှု၊ ပြောဆိုမှုတွေ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ EIA ထဲက တစ်ချက်ကို အခြေခံပြီး ပြောတာပါ။
အခြေအနေမှန်တွေကိုတော့ လိမ်ညာခွင့်မရှိဘူး။ ပုံဖျက်ခွင့်မရှိဘူး။ အခြေအနေမှန်ကို လစ်လျူရှုပြီးပြောတယ်လို့ ယူဆလို့ရတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ တွေ့နေရပါတယ်။ တစ်ခုက မြစ်ကြီးငါးသွယ်၊ မြစ်ငယ်ငါးရာ၊ ချောင်းတွေမြောင်းတွေကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ နုန်းတွေ၊ အနည်အနှစ်တွေကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်း ပေါ်ဟာ တိုးတက်တဲ့၊ မြေသြဇာ ကြွယ်ဝပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်း လာမယ်ပြောတာ ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရဲ့ လေ့လာချက်စာတမ်း ’နစ်မြုပ်လာ နေသောမြစ်ဝကျွန်းပေါ်များ’
အရ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွေ မြင့်တက်လာ မယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွေသည် အခြေခံအားဖြင့် နိမ့်လာမယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ နိမ့်ကျတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်သလဲဆိုတော့ မြေအောက်ရေကြော ထိခိုက်တယ်။ အခုလိုမျိုး သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဖော်ထုတ်ထားပြီးသားကို လစ်လျူရှုပြီးတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သည် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာ လိုရာဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ယန်စီမြစ်ဟာ အရှည်ဆုံးမြစ်ပါ။ ကမ္ဘာ့အံ့သြဖွယ် ယဉ်ကျေးမှု
တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ယန်စီမြစ်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့် အမွေအနှစ် ၁၀ ခုထဲမှာ ပါနေ ပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် ၁၀ ခုကနေ ၁၁ ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတစ် ခုကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ပါ။
9/12/2011 01:49:00 PM
ချင်းလူငယ် ကြားဘိန်းစွဲသူ များလာ
ခုတလော ချင်းပြည်နယ်နဲ့ အိန0x081ဒိယ နိုင်ငံနယ်စပ် တွေမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတွေ အဆမတန် တိုးလာပြီးတော့ ဘိန်းစွဲတဲ့ လူငယ်တွေများ လာလို့ ဒေသခံလူကြီးတွေ အတော် စိုးရိမ်လာရတဲ့ အခြေအနေ ဆိုက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီစိုက်ခင်းတွေဟာ အိန0x081ဒိယခွဲထွက်ရေး မဏိပူ ကသည်းသူပုန်တွေ အခြေစိုက်တဲ့ ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံမြို့နယ်နဲ့ ကျီခါးမြို့နယ်ခွဲကနေ တမူးအနောက်ဘက်ထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးလာတာလို့ ဒေသခံတွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
၂၀ဝ၀ ခုနှစ်ကနေစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ၂၀ဝ၈ခုနှစ်လောက်မှာ တော်တော် ကြီးကျယ်လာပြီး ဧက ၅၀ဝ ကျော်လောက်ရှိနိုင်ကြောင်း ၊အိန0x081ဒိယကိုတော့ သုံးပုံ၁ပုံလောက်သွားပြီး ဒေသ အာဏာပိုင်တွေကို သတင်းပေးပေမဲ့ အရေးယူတာ မရှိဘူးလို့တွန်းဇံဒေသခံ တယောက်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ဒီလိုဘိန်းတွေစိုက်ပျိုးနိုင်အောင် ဒေသခံချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူပုန်တွေက တောင်ယာခုတ်ခိုင်းပုံနဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင် ဘိန်းစိုက်လာကြသလို ဒေသခံလူငယ်တွေ ဘိန်းစွဲလာတဲ့အကြောင်း ချင်းတိုင်းရင်းသား တယောက်ကလည်း ပြောပါတယ်။
မဏိပူကသည်း သူပုန်တွေက ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဘိန်းအရောင်း အဝယ်လုပ်ကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပေမယ့် ဘီဘီစီကတော့ သီးခြား အတည်ပြုချက်မရသေးပါဘူး။
ချင်းပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ ဘိန်းစိမ်းတပိဿာကို မြန်မာငွေ၆သိန်းနဲ့ ကသည်းသူပုန်တွေက ကောက်ပြီးတော့ ဘိမ်းမည်းလုပ်ပြီး တပိဿာ ၁၆ သိန်းလောက်နဲ့ ဖေါက်သည် ပြန်ပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ မဏိပူခွဲထွက်ရေး သူပုန်တွေဟာ တွန်းဇံမြို့နယ် ကျီခါးအရပ်နဲ့ ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်း တလျှောက်မှာ အခိုင်အမာ အခြေစိုက်ပြီးတော့ တမူး ကလေးအပါအဝင် စစ်ကိုင်းတိုင်းနေရာ အတော်တော်များများမှာ မြန်မာမှတ်ပုံတင်နဲ့ တရားဝင်နေထိုင်နေကြပါတယ်။
ကချင် နယ်ခြားစောင့်တပ် ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလာ
NDA-Kနဝတ နအဖနဲ့ အစောဆုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့တဲ့ NDA (K) ဒီမို ကရေစီသစ် ကချင် ငြိမ်းအဖွဲ့ တဖြစ်လဲ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဟာ ဝင်ငွေ ပြတ်ပြီး ဆက်လက် ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲ နေတယ်လို့ ကချင် ပြည်နယ်ကနေ သတင်းတွေ ရရှိပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကို စခုန် တိမ့်ယိမ်းက ခေါင်းဆောင်ပြီး အခု အခါမှာ သူကိုယ်တိုင် ကတော့ သားနဲ့အတူ နေပြည်တော်မှာ အမတ် ဖြစ်နေပါတယ်။အစပိုင်းမှာ NDA-K ရဲ့ ဒေသကို အစိုးရက ကချင် ပြည်နယ် အထူးဒေသ ၁ အဖြစ် သတ်မှတ် ပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း ပေးရာမှာလည်း သူတို့ အဖွဲ့က လျောလျော လျူလျူနဲ့ လက်ခံ လိုက်နာခဲ့တဲ့ အတွက် သူတို့ဟာ ပထမဆုံး နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖြစ်လာပြီး နောက်ပိုင်း လခ တခါပဲ ရတဲ့ အတွက် ဒေသတွင်းက လူထုနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို အခွန် ကောက်ပြီး ရပ်တည် နေပါတယ်။နယ်ခြားစောင့် စစ်သားတွေ နေမကောင်းလို့ မြစ်ကြီးနား စစ်ဆေးရုံ ပို့တဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းကောင်း ဆက်ဆံ မခံရဘူးလို့ နယ်ခြားစောင့်တပ် အရာရှိ ကိုယ်တိုင်က ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။စခုန် တိမ့်ယိမ်းတို့ ကိုယ်တိုင်က ဒီစစ်သားတွေ အတွက် ဘာမှ တာဝန်ခံ လုပ်ပေးတာ မရှိဘဲ အရင် NDA-K အဖွဲ့ထဲက ထိပ်သီး တချို့သာ လခ မှန်မှန် ရတယ်လို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်က အမည် မဖော်လိုသူ တယောက်က ဘီဘီစီကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
9/12/2011 01:06:00 PM
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုအဖြစ် ဝေဖန်
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှု အဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP)က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း မဲရုံတခု၌ ဆန္ဒမဲများ ရည်တွက်နေစဉ်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့ ပေါက်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ဇံကို ၃ ကြိမ်တိုင် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်အပြီး ရှုံးနိမ့်ကြောင်း
ကော်မရှင်ရဲ့ ဒီလ ၉ ရက်နေ့က ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် RNDP ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုပေါင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ဝေဖန်လိုက်ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကြေညာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ မြေပုံမဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ တရားတယ်လို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာပြီးတော့ ပုံကြီးချဲ့ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ မဲပေးထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကို ဒီလို ဖြုတ်ချတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှု ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။”
ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစိုးရ အာမခံချက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ကလည်း ကော်မရှင်ရဲ့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်ခံလိုက်နာနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအကြား ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားသွားစေပြီလို့လည်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကော်မရှင် ဆိုတာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေး ဆိုရင်လည်း လွှတ်တော်အနေနဲ့လည်း
နုတ်ထွက် ပြီးပါပြီ။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကလည်း နှုတ်ထွက်ပြီးပြီလို့ ကျနော်တို့ ကြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဘယ်သူတွေနိုင်မယ် ဘယ်သူတွ ကျရှုံးမယ်ဆိုတာကို ဒီနေ့ ဖြစ်ရမယ့် အဖြေကို မနေ့ညကတည်းက သိနေတယ်ဆိုတာလေးတခု ကျနော်တို့ လွှတ်တော်တက်နေတဲ့ ကာလမှာ ကြားလိုက်ရတဲ့တော့ ကျနော်စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီး ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဘာကို ယုံကြည်ရမလဲ။ အကုန်လုံးပေါ့ဗျာ ပြန်သုံးသပ်ရရင်။ ”
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရှုံးနိမ့်ကြောင်း ကြေညာခံလိုက်ရတဲ့ ဦးအောင်ကျော်ဇံကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းအောင်ခိုင်က တပ်မတော်အစိုးရနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အကြည်အညိုပျက်စေမှု၊ မဲမသမာမှုစတဲ့ စွဲချက်တွေနဲ့ တိုင်ကြားခဲ့တာပါ။
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်တိုင်းရသားများတိုးတက်ရေးပါတီက လွှတ်တော် ၃ ရပ်လုံး အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၃၅ ဦး ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရပြီး အဲ့ဒီထဲက ၉ ဦးကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက ပထမအဆင့် တရားစွဲဆို တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲက ပထမအဆင့်မှာတော့ ၃ ဦးကို အနိုင်ပြန်ရခဲ့ပြီး ၆ ဦးကို ကော်မရှင်က ရှုံးနိမ့်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေ့ ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦးက ထပ်မံ အယူခံဝင်ရာမှာ ကော်မရှင်က ၃ ဦးအနိုင်ပေးခဲ့ပြီး ၃ ဦးကို ရှုံးနိမ့်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ ပြန်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး တတိယအဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးက နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အယူခံထပ်ဝင်ရာမှာ ၂ ဦးကို အနိုင်ပေးပြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ဇံကို ရှုံးနိမ့်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
9/12/2011 11:04:00 AM
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ၀န်ကြီး ပြောဆို
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ကန့် ကွက်မှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ ဆက်လက်အကောင်အထည်
ဖေါ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းက မနေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနေ့က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက်တွေက မေးမြန်းရာမှာ ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းက အခုလို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှု ရှိမရှိ အတွက် အစိုးရက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၂၅သန်း နဲ့ ငှားရမ်းပြီး သုတေသန လုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကြိုတင် တွက်ဆမှု အတွက် အချိန် ၃ နှစ်ခန့် ယူခဲ့ကြောင်း ၀န်ကြီးက ပြန်လည် ဖြေကြားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘီလူးချောင်း ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းဟာ ဒီနေ့ အချိန်အထိ ဆက်လက် လည်ပတ်ဆဲ ဖြစ်ပြီး (၅၂) နှစ်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘီလူးချောင်းကြီးလည်း မပျက်စီးဘဲ ဒီနေ့ အထိ ရှိနေကြောင်း ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းက နှိုင်းယှဉ် ရှင်းလင်းသွားတယ်လို့ ပြည်တွင်း သတင်းထောက် တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီအတွင်း ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ ဒေသက တရုပ် အစိုးရရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း တွေကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ မနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန် ဒီစီမြို့ က တရုပ်သံရုံး ရှေ့မှာ မြန်မာ့ အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြ ပါတယ်။
တရုပ် အစိုးရ အနေနဲ့ အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသစွာ ရေရှည် အကျိုးစီးပွားကို ကြည့်ဖို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလို့ စီစဉ် ဆောင်ရွက်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လွင်က ပြောပါတယ်။
မြစ်ဆုံဒေသက ရေအားလျှပ်စစ် ရေကာတာ စီမံကိန်းတွေ အပါအ၀င် ကျန်တဲ့ မြစ်တွေတလျှောက် ဆောက်လုပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုတွေဟာ တရုပ်အစိုးရမှာ
တာဝန်ရှိကြောင်း စတဲ့ စာတမ်းတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလို့ သိရပါတယ်။
9/12/2011 10:59:00 AM
The Voice Weekly No.7/ Vol.39
9/12/2011 05:07:00 AM
အလင်းတန်း ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၆၇၀
9/12/2011 05:05:00 AM
9/12/2011 04:57:00 AM
မေး ။ ။ ခုတလော သီးလေးသီး အဖွဲ့ ပြည်တော်ပြန်ဝင်မယ်ဆို့ တဲ့သတင်းတွေကြားနေရတာကို မေးချင်လို့ပါ။ ကြယ်သီး ။ ။ ကျနော်တို့တော့ လောလောဆယ်ပြန်ဘို့ အစီစဉ်မရှိသေးပါဘူး မေး ။ ။ သီးလေးသီးအဖွဲ့သားတချို့တော့ ပြန်မယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားခင်ဗျ။ ကြယ်သီး ။ ။ အဲဒီအတွက်တော့ အတိအကျမသိဘူးခင်ဗျ။ ပြောသံတွေကြားတာတော့ အစုံပဲ။
မေး ။ ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့က မြန်မာပြည်မပြန်သေးဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် မပြန်သေးတာလဲ။ ပန်းသီး ။ ။ ပထမအချက်က ကျနော်တို့အစ်ကိုဆရာ ကိုဇာဂနာနဲ့တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွတ်မြောက်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ကျနော်တို့အနေနဲ့သူတို့တွေလွတ်မြောက်တာကိုလိုချင်၊ တွေ့ချင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်က တိကျတဲ့ဥပဒေတွေလဲ မထုတ်ပြန်သေးဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် ပြန်ဘို့ကိစ္စကို မစဉ်းစားသေးတာပါ။ ပြန်သင့်တဲ့တနေ့ ရရင်တော့ ပြန်မှာပေါ့ဗျာ။
မေး ။ ။ သီးလေးသီးအဖွဲ့ ပြန်မယ်၊ မပြန်ဘူး ပြောနေကြတာကိုကော ဘာများ ပြောစရာရှိသေးလဲ။ ကြယ်သီး
။ ။ဟုတ်ကဲ့။ သီးလေးသီးအဖွှဲကြီး မြန်မာပြည်ပြန်တာကတော့ လုံးဝ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကိုယ့်သဘော ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့တချို့ ပြန်ကြတဲ့သူတွေတော့ ရှိကြမှာပါ။ အဲဒါကို သီးလေးသီးအဖွဲ့ကြီး ပြန်တယ်လို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။
။ ။ အစ်ကိုဆရာ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့နေ့ မင်္ဂလာဒုံလေယဉ်ကွင်းကြီးမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ လေယာဉ်ကွင်းမှာ သွားကြို၊ သွားပို့ မလုပ်ဘူးတဲ့ အကိုဆရာကို တွေ့ချင်ပါတယ်ဗျာ။ သစ်ထူးလွင်
9/12/2011 03:58:00 AM
ဂေါ်ဖီအာ။ ။အတူတူတွဲပြီး “ဂွင်”ရိုက်နိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဟိုလူသည်လူတွေ ဂွင်သွားမဖန်ခင် ကျနော်တို့ အရင်ဆုံး ဂွင်ဖန်နိုင်အောင် ကတိုက်ကရိုက်စီစဉ်လိုက်တာဗျ။ ကျနော်တို့လို ဂွင်ဖန်ဖို့ ချောင်းနေတဲ့သူတွေက
မနည်းဘူးလေ။ ဟိုမီဒီယာ သည်မီဒီယာတွေအပြင် သံရုံးတွေမှာ ပြန်ပြီး ဂွင်ရှာဖို့ စာရင်းပေးထားတာ ၁၀၀ ကျော်လောက်ရှိနေပြီဗျ..။ ဆိုတော့ သူများထက်စောပြီး ပြန်မှ ပိုအဆင်ပြေမှာ..။ ဟဲ ဟဲ.. လက်ဦးမှု ရယူလိုက်တာပေါ့ဗျာ..။
ဂေါ်ဖီအာ။ ။အင်း..ခင်ဗျားက မီဒီယာသမားလုပ်ပြီး အတော် အောက်တာပဲ။ ဘယ်လိုဂွင်လဲဆိုတော့… စားပေါက်ဂွင်ပေါ့ ဗျ။ အခုခေတ်က “ဂွင်” ခေတ်ဗျ။ ပြောခဲ့ပါပကော.. “ဂွင်”ရှိမှ “စင်”ရှိတာပါလို့..။ နောက်.. ပြည်ပမှာ ဂွင်တွေ
ရှိတာပေါ့ဗျာ..။ အများကြီး..။ အဲ.. ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က မတိုးနိုင်ဘူးဗျ။
ကိုယ့်ထက်စောရောက်တဲ့ “ဂွင်” ဆရာကြီးတွေက သူတို့“ဂွင်” ကို အထိမခံဘူးဗျ။ “မယားထိ ရင်ထိ.. ဂွင်တော့ မထိနဲ့ ” ဆိုတာမျိုး။ ကျနော်တို့က အချောင် ဂွင်မိမလား ထင်ထားတာ..။ အခု အခြေအနေအရ “အပြင်ဂွင်” ထက် “အထဲဂွင်”က ပိုမိတယ်လေ..။
ဂေါ်ဖီအာ။ ။ခင်ဗျား ကို နားလည်အောင် ရှင်းပြရရင် အခု ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ
နိုင်ငံတော် လူကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရာ အ၀န်းအ၀ိုင်းတွေက ဒီမိုကရေစီ ရနေပြီဗျ။
လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရတယ်။ ရေးချင်တာရေး၊ ပြောချင်တာပြော၊ စားချင်သလိုစား၊
အားလုံးပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး တိုးတက်သာယာတဲ့ ဒီမိုကရေစီရနေကြပြီလေ။ ဒီတော့ သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီး သူတို့လို ဒီမိုကရေစီရဖို့ သူတို့နဲ့ပေါင်းရမှာပေါ့ဗျ..။
9/12/2011 03:57:00 AM
လူထုစိန်ဝင်း "ဒီမိုကရေစီရပြီလား"နယ်က စာဖတ်ပရိသတ်မိန်းကလေးတွေနဲ့ လူငယ်လေးတွေ ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်း ဒီမေးခွန်းကိုမေးတတ်ကြတယ်။ စာစုံအောင်ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ လူငယ်တချို့ကတော့ "ရွှေပြည်ကြီး ကိုရောက်ပြီလားအဘ"လို့ မေးကြတယ်။မှန်ရာကိုသာ ပြောချင်တစ်ခါက လောကပါလတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ရွှေပြည်ကြီးကို ရောက်ဖို့မဝေးတော့ပါဘူးလို့ ရေးခဲ့ဖူးတာကို ရည်ညွှန်းပြီး 'ရွှပြည်ကြီး' ရောက်ပြီလားလို့ မေးတာပါ။ သူတို့ဒီလိုမေးတာဟာ တကယ်သိချင်လို့မေးကြတာဖြစ်တယ်။ ခနဲ့ပြီး၊ ကလိပြီးမေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ် ငယ်ကြသေးပြီး အတွေ့အကြုံနုနယ်ကြလေတော့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုမှာ အားနည်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ယုံကြည်လေးစားမှုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အဖြစ် သဘောထားပြီး လာရောက်မေးမြန်းကြတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူငယ်လေးတွေကို မှားယွင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေမပေးချင်ဘူး။ အလိမ္မာဖက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွထွက်တဲ့ ယောင်ဝါးဝါးစကားမျိုးလည်း မပြောချင်ဘူး။ မျက်မှန်စိမ်းတပ်ပြီး ကြည့်တဲ့အဆိုးမြင်သက်သက် စကားတွေပြောပြီး သူရဲကောင်းလည်းမလုပ်ချင်ဘူး။ သူတို့လေးတွေရဲ့ ယုံကြည်လေးစားမှုကို တန်ဖိုးထားပြီး ကိုယ်မြင်တဲ့အတိုင်း မှန်ရာကိုသာပြောချင်တယ်။ရပ်ကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူး"ဒီမိုကရေစီမရသေးပါဘူး။ အခုမှဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ခြေတစ်လှမ်းချမိရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ခြေလှမ်းသွက်သွက် လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အားလုံးဝိုင်းပြီး လမ်းရှင်းတာတွေ၊ ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်း ဖယ်ရှားပေးတာတွေ လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ဘေးကရပ်ကြည့်နေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး"နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်။ ပြည်သူလူထုမပါဝင်ရင် ဘယ်စနစ်မှ မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ နှစ် ၅၀ သမိုင်းကြောင်းက သက်သေပြပြီးဖြစ်တယ်။ အရင်ကတော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်တို့၊ အာဏာရှင်စနစ်တို့ဆိုတာတွေကို ပြည်သူကလက်မခံတဲ့အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမပြုဘဲနေခဲ့လို့ အဲဒီစနစ်တွေမအောင်ခဲ့ဘူး။စောင့်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးများအခုတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားမယ်လို့ အတိအလင်းပြောဆိုထားတာကြောင့် ပြည်သူလူထုက ရင်ထဲမှာသဘောကျနှစ်ခြိုက်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ် ၅၀ အတွေ့အကြုံကရှိနေလေတော့ သံသယစိတ်ကို ဖျောက်လို့မရသေးဘူး။ စောင့်ကြည့်အကဲခတ်ချင်သေးတယ်။ အဲဒီလို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေအောက်မှာ ခြေလှမ်းမှန်မှန် လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့၊ အထူးသတိထားဖို့လိုတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် အတွေ့အကြုံများအရ အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားနဲ့ အပယ်ခံလူတန်းစားဆိုပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေရင် ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို မရောက်နိုင်ဘူးလို့ ထောက်ပြချင်တယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ခြစားမှု၁၉၄၈ က ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကြားမှာ ဒီမိုကရေစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ အစိုးရပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်းတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို မရောက်ခဲ့ဘဲ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပွဲဖြစ်ပြီး အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ် မအောင်မြင်ခဲ့သလဲဆိုတော့ အဓိကအချက်ကြီးနှစ်ချက်ကြောင့်လို့ ယူဆတယ်။ ပထမအချက်က တစ်ပြည်လုံးအနှံ့ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ အာဏာရဖဆပလအဖွဲ့ကြီးအတွင်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ တစ်နေ့တခြား ကြီးထွားသထက်ကြီးထွားလာပြီး သူတစ်လူငါတစ်မင်းနဲ့ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရအခြေအနေထိ ဆိုက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ခြတွင်းကြီးတစ်ခုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုက ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးဝါးသလဲဆိုရင် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုယ်တိုင်က "ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးဟာ ခြတွင်းကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ။ ထင်းရှူးသေတ္တာတစ်လုံး ပစ်ချလိုက်ရင် ခြတွေ ၀ိုင်းစားကြလို့ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာ မြင်ကွင်းက ပျောက်ကွယ်သွားသလို အခြေအနေမျိုးထိ ဆိုက်ရောက်နေပြီ"လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားရတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက် ဦးနုဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ဘ၀က အနားယူပြီး ဖဆပလပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို ဇောက်ချလုပ်ဖို့ ဖဆပလဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တစ်ခုတည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဘဆွေကို ၀န်ကြီးချုပ် တာဝန်လွှဲပေးခဲ့တယ်။စသုံးလုံးဘုတ်အဖွဲ့ကြီးဖွဲ့အဲဒီနောက် ဦးချမ်းသာကို ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာ တာဝန်ပေးပြီး အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့(စစစ)ဆိုတဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးမသမာမှုတွေနဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေကိုချည်း ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးဖို့ အထူးတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းကြီးငယ်များအကြား လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေ ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးပြီး ထောင်ချအပြစ်ပေးခဲ့တာတွေ ရှိတန်သလောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် ခြတွင်းကြီးကတော့ ရှိမြဲရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေလည်း ရှိနေတာပါပဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ခြစားမှုကိစ္စတွေက ၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ ဖဆပလအစိုးရ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာတွေမှာစတင် သန္ဓေတည်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။လိုင်စင်ခေတ်အဲဒီခေတ်က ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးစနစ်ဆိုပေမယ့် တိုင်းပြည်ထူထောင်စအချိန် ဖြစ်တာကြောင့် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကို အစိုးရက ကြီးကြပ်ထားပြီး လိုင်စင်ရသူများကိုသာ သွင်းခွင့်ထုတ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာခြစားမှုတွေ စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့တယ်။ ဖဆပလ၀န်ကြီးတွေက သူတို့ကို ရန်ပုံငွေဆိုပြီး ပံ့ပိုးငွေများများပေးတဲ့ မြန်မာကုန်သည်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့နီးစပ်သူတွေကို လိုင်စင်ချပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီလူတွေအများစုက တကယ်အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ကြတာမဟုတ်ဘဲ၊ လိုင်စင်လျှောက်ခွင့်မပြုတဲ့ တရုတ်နဲ့ကုလားကုမ္ပဏီကြီးတွေလက်ထဲ လိုင်စင်ကို လက်လွှဲရောင်းချလိုက်ကြတယ်။အခွင့်ထူးခံနဲ့အပယ်ခံအဲဒီအချိန်ကစပြီး အခွင့်ထူးခံ (လိုင်စင်ရ)လူတန်းစားနဲ့ အပယ်ခံလူတန်းစားဆိုပြီး ကုန်သည်လောကမှာ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ အပယ်ခံလူတန်းစားတွေကလည်း သူတို့စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အစိုးရစက်ယန္တရားကြီးအတွင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး အခွင့်အရေးရအောင် လုပ်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခြတွင်းကြီးဟာ ပြန့်သထက်ပြန့်၊ ကျယ်သထက်ကျယ်လာပြီး နှိမ်နင်းလို့မနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိရောက်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ ဖဆပလအစိုးရကြီးနဲ့အတူ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ပါ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတယ်။လေမဟုတ် အလုပ်နဲ့ပြအခုအစိုးရသစ်က ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ခြေလှမ်းစတင်ချတဲ့အချိန်မှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအားလုံးရဲ့ အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားနဲ့ အပယ်ခံလူတန်းစားဆိုပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုကို အထူးသတိထား ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုတယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သံသယမျက်လုံးတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံး "လေမဟုတ်အလုပ်နဲ့ သက်သေပြ"ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီမရသေးပါဘူး။ ပြည်သူတွေအားလုံး ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကို ပီပီပြင်ပြင်မခံစားရသေးပါဘူး။နေစရာမရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒီလိုခြေလှမ်းပြင်စရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ ယန္တရားကြီးသုံးရပ်စလုံးမှာ ပါဝင်ကြသူမှန်သမျှ၊ ပြည်သူတွေ မခံစားရသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကို အခွင့်ထူးခံယူခွင့်မပြုဖို့ သတိထားဆင်ခြင်ကြသင့်တယ်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ခေါင်းထဲမှာစွဲနေတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုကို ပြောပြပါရစေ။ ကြာတော့ကြာပါပြီ။ နိုင်ငံခြားက သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်မိခဲ့တာပါ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ၀န်ကြီးချုပ် အက်ဒ၀ပ်ဟိသ် (Edward Health) ဟာ လေဘာပါတီက ဟာရိုးဝီလဆင် (Harold Wilson)ကို ရှုံးနိမ့်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးက ဆင်းပေးရပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်စံအိမ်အမှတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်းက ဖယ်ပေးရမယ့်ရက်မှာ နေစရာအိမ်မရှိလို့ ဖယ်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။သူလိုဖြစ်ကြရင်ကောင်းမှာပဲအဲဒီအချိန်မှာ သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ သူပိုင်အိမ်ခန်းတစ်ခန်းမှာ ခေတ္တနေထိုင်ဖို့ပေးခဲ့တာကြောင့် လူပျိုကြီးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာဟိသ်ဟာ တစ်ယောက်တည်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခန်းက ခပ်သေးသေးဆိုတော့ သူပိုင်ပစ္စည်းတွေ ထားစရာမရှိလို့ တခြားမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ တောပိုင်းက စံအိမ်မှာ ပို့ထားရပါတယ်။ အဲဒီသတင်းလေး ဖတ်ခဲ့ရတာကြာလှပြီဖြစ်ပေမယ့် ခုအချိန်ထိ ခေါင်းထဲမှာမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံး မစ္စတာဟိသ်လို ဖြစ်ကြရင်ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ထဲမှာ အောက်မေ့မိပါတယ်။ဘယ်သူ့ကိုမှချန်မထားဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုသာပြောပြီး ခင်ဗျားတို့စာနယ်ဇင်းသမားတွေတော့ မပြောတော့ဘူးလားလို့ မေးနိုင်ပါတယ်။ ပြောမှာပါ။ အမြင်မတော်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ချန်မထားပါ ဘူး။ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို ပြောချင်တာကတော့ တိုင်းပြည်က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဖြစ်သေးပါဘူး။ ပြည်သူတွေထက်ထူးပြီး ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေ မယူချင်ပါနဲ့။ ပြည်သူတွေ အားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ သူတို့ ၀ယ်စီးချင်တဲ့မော်တော်ကား ၀ယ်မစီးနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကအခွင့်ထူး လိုချင်တာမျိုး၊ ကားဝယ်ခွင့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း အတူတူပါပဲ။ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားမဖြစ်ချင်ပါနဲ့။ကိုယ်ကျိုးရှေ့တန်းတင်လွန်းဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်ရမှာက ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို မြန်မြန်ရောက်ဖို့ ၀ိုင်းကြိုးစားကြဖို့ဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်က ဒီမိုကရေစီ မရသေးခင်မှာ ဒီမိုကရေစီရပြီးမှ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို လုပ်တာဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှေ့တန်းတင်လွန်းရာကျတယ်။ အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားနဲ့ အပယ်ခံလူတန်းစား ကွဲပြားမှုကြီးမားလွန်းရာက ခြတွင်းကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားပြီး ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးနဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကြီးပါ နိဂုံးချုပ်သွားရတာကို မမေ့ကြဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
9/11/2011 08:40:00 PM
ဧရာဝတီမြစ်ရှိ အကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း မြစ်ဆုံကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေ
ဖားကန့်မှော်နယ်မြေရှိ ဥရုချောင်းတစ်လျှောက် ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများကို ဘက်ဟိုးယာဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်မည့် အကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း မြစ်ဆုံကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လက်ရှိ တည်ဆောက်နေသည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမြို့နှင့် မြစ်ဆုံဒေသတို့အကြားတွင် တည်ရှိနေသည်။ “စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းပုံမှန် လည်ပတ်နေပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ်နားမှာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းတွေ ရုံးထိုင်တာရှိတယ်။ အဲဒီဘက် တစ်ဝိုက်ရောက်ဖြစ်တော့ အနေအထားကြည့်ရတာ လုပ်ငန်းပုံမှန် လည်ပတ်နေတဲ့ သဘောမျိုးပဲ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒေသခံဝန်ထမ်းတွေ ရှိသလို အောက်ပိုင်းဒေသတွေက ရောက်လာတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ရပ်နားထားတာမရှိပါဘူး” ဟု မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဒေသခံတစ်ဦး က ပြောကြားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းက နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံနှင့် အထက်ဘက် မေခ- မလိခ မြစ်ဝှမ်းတွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိ သော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ မှာ မြစ်ဆုံ၊ ချီဖွေ၊ ချီဖွေငယ်၊ ၀ူဆောက်၊ ခေါင်လန်ဖူး၊ ယီနန်၊ ဖီ ဇော၊ လိုင်ဇာတို့ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း စက်တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၈၄၉၉ မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၅ နှစ်အတွင်း အပြီး တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စီမံကိန်းများကို အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ China Power Investment Corporation (CPI) တို့ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီသည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် မပြုလုပ်မီ ကြိုတင်လေ့လာဆန်းစစ်သည့် Environmental Impact Assessment ပြုလုပ်ထားသည် ဆိုသော်လည်း ကချင်ပြည်နယ် ဒေသတွင်း လူမှုစီးပွားရေးပိုင်း သက်ရောက်နိုင်ခြေ ရှိမှုများ၊ မြစ်စီးဆင်းပုံအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ခြေများ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံ လေ့လာမှုများ၊ တိကျသေချာသော ထုတ်ပြန်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းလည်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံများအကြား သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် အစိုးရသစ် လက်ထက် ပထမဆုံး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိ၊ မရှိဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ရာတွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်၊ မလုပ် ကိစ္စသည်လည်း အမျိုးသားအကျိုး စီးပွားရေးအတွက် အစစအရာရာကို ချိန်ဆပြီး ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် မိမိ ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်အောင်၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ပျက်စီးသွားအောင် မည်သည့်အခါမျှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့် မိမိတိုင်းပြည် ကောင်းစားစေလိုသော စေတနာအရင်းခံနှင့် ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း လေ့လာပြီး ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက အသက်သွေးကြော သဖွယ် ဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်သည် အဆိုပါ မြစ်ဆုံဒေသ မှ အစပြုကာ လူနေထူထပ်သော၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးသော မြို့ကြီးများ၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး အချို့၏ မြို့တော်များကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလျက် ရှိသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း တစ်လျှောက်တွင် မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ ကသာ၊ သပိတ်ကျဉ်း၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြင်းခြံ၊ ပခုက္ကူ၊ ချောက်၊ ရေနံချောင်း၊ မကွေး၊ မင်းဘူး၊ သရက်၊ ပြည်၊ ရွှေ တောင်၊ မြန်အောင်၊ ဟင်္သာတ၊ ဓနုဖြူ၊ ညောင်တုန်း အစရှိသည့်မြို့များ တည်ရှိနေသည်။
“မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရက ပြန်လည် သုံးသပ်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ပြန်လှန် သုံးသပ်နေတဲ့ ကာလမှာ ဆက်လက် ဆောက်လုပ်နေတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ထားသင့်ပါတယ်”ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ သစ်ထူးလွင်
9/11/2011 08:34:00 PM
တစ်ဆက်ထဲမှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ စီးပွားရေး နံပါတ်တစ်နေရာ ရယူဖို့ တရုတ် ဘယ်လောက် အချိန်ယူမလဲဆိုတာ ဂျိုရှောက်ချွန်း ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ပြီး ဈေးကွက် စောင့်ကြည့်သူတွေက အကဲခတ်နေကြသည်။
9/11/2011 08:32:00 PM
ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု ရုပ်သိမ်းရေး သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြည့်မီဖို့လို
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ် နာရေးကူညီမှု အသင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာစဉ်။ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ် (Derek Mitchell) က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဆိုရင် ပိတ်ဆို့ထားရတဲ့ အခြေခံ အကြောင်းရင်းတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ရှိမရှိ သူ့အနေနဲ့ ဆန်းစစ်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါ သတင်းယူနေတဲ့ ဗွီအိုအေ ၀ိုင်းတော်သူ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက ရန်ကုန်မြို့ကနေ တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ၊ သမ္မတ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် တချို့နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တချို့ကနေ ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရေး ပန်ကြားနေကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းပေးရေးအတွက် အခြေခံ ပြုပြင်ရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့် အချက်တွေကို အရင် ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် တွေ့နေရတဲ့ အထိုက်အလျောက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်။”
အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်ဟာ ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီက မြောက်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ နာရေးကူညီမှု အသင်းကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ လိုက်ပါ သတင်းယူခဲ့ရင်းနဲ့ ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရေး အလားအလာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူးတဦး ဖြစ်တဲ့ သူ့အနေနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူဝါဒဟာ တကယ်ပဲ ထိရောက်မှု ရှိမရှိဆိုတာ မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော် ဒီတာဝန်ကို ယူထားတာ သီတင်းပတ် အနည်းငယ်ပဲ ရှိသေးတော့ အမေရိကန်ရဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူဝါဒ ထိရောက်မှုရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာ မှတ်ချက်ပြောဖို့ စောလွန်းပါသေးတယ်။ ဒီခရီးစဉ်မှာတော့ အခုချိန်ထိ ကျနော် တွေ့ရသလောက် အတော်လေး အကျိုးရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကို အနီးကပ် ဆန်းစစ် လေ့လာခွင့်လည်း ရပါတယ်။ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ရင်းရင်းနှီးနှီးလည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။”
နာရေးကူညီမှု အသင်းလို လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေကို တက်တက်ကြွကြွ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်အားပေးနေကြတာတွေ တွေ့ရလို့ နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း တဘက်တလမ်းက ပါဝင် ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာကိုလည်း အခုလို မှတ်ချက်ပေးပါသေးတယ်။
“လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျနော်တို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သောကြာနေ့ နေပြည်တော်ကို သွားတုန်းက မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို ဘယ်လိုဖော်ဆောင်နေသလဲ ဆိုတာကို ကျနော်သိအောင် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အခု မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တွေ့ဆုံနိုင်ကြပြီဆိုတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖြစ်ထွန်းမှုတွေပဲလို့ ကျနော် မှတ်ချက်ချရမှာဖြစ်တယ်။”
အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်ဟာ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်သူ ဦးစီးတဲ့ နာရေးကူညီမှု အသင်းနဲ့ သုခ ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းကို တနာရီကျော်ကြာ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဆက်လက်ပြီး တောင်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ NLD လူငယ် မဖြူဖြူသင်း ဦးစီးတဲ့ HIV/AIDS ဝေဒနာသည်တွေ စောင့်ရှောက်တဲ့ ဂေဟာကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာပြီး လူနာတွေကို နှုတ်ဆက် အားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ HIV/AIDS အထူးကု ဆေးရုံကိုလည်း ဒီနေ့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
မနက်ဖြန် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့မှာတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD CEC ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို တွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
9/11/2011 08:26:00 PM
မင်းကိုနိုင်မိသားစုထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် တွေ့ဆုံ ဓာတ်ပုံသတင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နေ့လယ် ၁၂း၁၅ မှ ၁း၃၀ အထိ မင်းကိုနိုင်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်ကာ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အားပေးစကားများ ပြောကြားခဲ့သည်။.
9/11/2011 08:23:00 PM
EU မဟာမင်းကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး
ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက သီးခြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Kristalina Georgieva (ဝဲမှ ဒုတိယ) ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့က နေအိမ်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ်။ (Photo: AFP)
မဟာမင်းကြီး Ms Karistalina Georgia ခရစ္စတလီးနား ဂျော်ဂျီယာနဲ့အဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့မနက် ၉ နာရီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ လာရောက်တွေ့ဆုံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မိနစ် ၄ဝ ကြာ သီးခြား ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့
NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဟံသာမြင့်က ပြောပါတယ်။“ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့
နှုတ်ဆက်တာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အလ္လာပ သလ္လာပ သဘောပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည် နဲ့ကတော့ မိနစ် ၄ဝ လောက်ကြာအောင် ပြောပါတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ ၁ဝ မိနစ်လောက်
စကားပြော၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ထွက်သွားကြတာ။ ရှေ့မှာရှိတဲ့ သတင်းထောက်တွေကိုလည်း လေယာဉ်ပျံ မမီမှာစိုးလို့ပါ ဆိုပြီး ဘာမှ ပြောမသွားဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း ဘာမှ မထုတ်ပြန်ပါဘူး”EU
မဟာမင်းကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာတွေ ဆွေးနွေးသလဲဆိုတာ အတိအကျ မသိရပေမယ့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီ ပေးရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မဟာမင်းကြီးနဲ့အတူ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီးနဲ့ တခြား အရာရှိတွေလည်း လိုက်ပါလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။